Gegada diyaaradaha ee Milan Bergamo waxay dayactireysaa qorshaha horumarinta 2030
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Gegada diyaaradaha ee Milan Bergamo waxay dayactireysaa qorshaha horumarinta 2030
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Investments • Italy War Deg Deg Ah • News • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Gegada diyaaradaha ee Milan Bergamo waxay sii wadaysaa inay ilaaliso qorshayaasheeda horumarinta kaabayaasha iyadoo dhowaan la daah furay albaabka cusub ee laga soo galo iridda laga soo galo ee cusub ee loo yaqaan 'Schengen', oo ah hal qeyb oo ka mid ah investment 435 milyan oo maalgashi si loo kordhiyo gegada oo dhan wadar ahaan 70,000m². Ballaarinta sidoo kale waxaa ka mid ah kordhinta hadda socota ee dhinaca galbeed ee dhismaha hadda jira, iyadoo loo diyaargaroobayo xiriir toos ah oo mustaqbalka la yeelanaya adeegyada tareennada, taasoo si weyn u kordhineysa xulashooyinka isku xirnaanta ee rakaabka garoonka.
Milan Bergamo waxay si weyn u maalgashanaysaa mustaqbalka si ay u sii horumariso oo ay isu dhigto mid ka mid ah albaabada hormuudka u ah Milan, iyo runtii Talyaaniga. "Waa inaan horay u aragnaa oo aan rajo wanaagsan ku qabnaa inaan ku laaban doonno heerarkii safafka hore ee cudurrada, sidaas darteedna waa inaan diyaar u nahay oo aan diyaar u nahay mustaqbalka," ayuu yiri Giacomo Cattaneo, oo ah Agaasimaha Duulista Hawada, SACBO. In kasta oo aan kordhinayno oo aan horumarinayno kaabayaasha dhaqaalaha, haddana waxaan daacad u nahay qaabkeenna 'fudud' ee ku wajahan rakaabka iyo la-hawlgalayaasha diyaaradaha. Waxaan dooneynaa inaan xaqiijino inaan sii wadno inaan noqono garoon diyaaradeed oo dhaqso badan oo firfircoon, oo ay ka buuxaan adeegyo iyo tas-hiilaad dhammaan. ”
Isaga oo diirada saaraya khibrada rakaabka, Milan Bergamo waxay dib u habeyn ku sameysay terminalkeeda si ay u abuurto qol badan qaab hal abuur leh oo waara. Qeybaha hore, garoonka diyaaradaha wuxuu si gaar ah ugu fiirsaday rakaabka dhaqdhaqaaqa yareeyay (PRMs) wuxuuna abuuray PRM Lounge cusub oo loogu talagalay kuwa leh baahiyaha gaarka ah. Maaddaama qof kastaa uu noqdo mid miyir qaba oo ka warqaba kuwa ku hareeraysan, waxaa xitaa muhiim noo ah inaan hubinno in qof kasta oo ka mid ah rakaabkeenna, iyadoo aan loo eegin heerarka awooddooda, uu marin u heli karo alaabteenna qiimaha leh si aan ugu oggolaano inay si nabadgelyo ah ku maraan si hufan, ”ayuu faallo ka bixiyaa Cattaneo.
Toos ugu socota Dakar
In kasta oo shaqada dhismuhu sii socoto in la soo uruuriyo dariiqa, garoonka diyaaradaha ayaa wali ku sii adkaynaya sii kordhinta isku xidhka wadadiisa wuxuuna si macquul ah ugu dabaal degay duulimaadkii ugu horreeyay ee Blue Panorama ee ku tagayay Dakar. Waxaa la bilaabay jimcihii la soo dhaafay, isku xirka shirkada duulimaadka talyaaniga ee caasimada Senegal ayaa ku biireysa garoonka diyaaradaha ee sii kordhaya ee duulimaadyada Afrika iyadoo ay la socoto duulimaadyada Morocco iyo Masar. “Waxaan ka gudubnay dayaxa in Blue Panorama uu aqoonsaday baahida suuqa ka jirta uuna doortay inuu u adeego bulshada weyn ee reer Senegal ee ku nool Talyaaniga kana bilaabo Milan Bergamo. In kasta oo dhibaatooyinkii sannadkan jiray haddana waxaan sii wadaynaa inaan u heellanno rakaabkeenna iyo la-hawlgalayaasheenna waana wax aad u wanaagsan xilligan in la gaaro oo la gaaro himilo, ”ayuu raaciyay Cattaneo.